I-BULATSA ne-IATA ukusungula isu lasemoyeni leBulgaria
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Airlines » I-BULATSA ne-IATA ukusungula isu lasemoyeni leBulgaria
Airlines • Airport • Izindaba Zezinhlangano • Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Izindaba zeBulgaria Breaking • Ukuhamba Ngebhizinisi • Investments • Izindaba • Ubuchwepheshe • Ezokuvakasha • Transportation • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba
I-International Air Transport Association (IATA) kanye ne-BULATSA, Umhlinzeki Wensiza Ye-Navigation Air yaseBulgaria, bavumile kutfutfukisa nekusebentisa Lisu Lavelonkhe Lasemoyeni lase-Bulgaria.
I-BULATSA ne-IATA bazoqinisa ukubambisana kwabo okukhona kwalolu hlelo, oluhlose ukuletha izinzuzo emphakathini ojikelezayo, ngenkathi ixhasa ukukhula komnotho kuzwelonke kanye nokuncintisana komkhakha wezindiza waseBulgaria.
Imfuno yabagibeli yokuthuthwa komoya eBulgaria isethwe ukuthi iphindaphindwe kabili kule minyaka engamashumi amabili ezayo. Ukusiza lesi sidingo, ngenkathi kuqinisekiswa ukuphepha, kanye nokuphatha izindleko, ukukhishwa kwe-CO2 nokubambezeleka, kudinga iBulgaria ukuthi iqhubekisele phambili indawo yayo yomoya nenethiwekhi ye-Air Traffic Management (ATM). Ukuphuculwa kwesikhala sasemoyeni okuphumelelayo kulindeleke ukuthi kudale izinzuzo ezinkulu, kukhiqize imali eyengeziwe engama- € 628 million kwi-GDP yaminyaka yonke kanye nemisebenzi eyi-11,300 minyaka yonke ngonyaka ka-2035.
I-BULATSA ne-IATA bazibophezele ekusebenzisaneni kanye nabo bonke ababambiqhaza bezindiza ukuletha nokusebenzisa Isu Lasemkhathini Kazwelonke ukweseka uhlelo lweSingle European Sky (SES). Izici ezisemqoka zaleli su zihlanganisa ubuholi nendlela yokubambisana yababambiqhaza, ukuphathwa kwendawo yasemoyeni, kanye nokwenza ubuchwepheshe besimanje bohlelo lwe-ATM.
UGeorgi Peev, uMqondisi-Jikelele we-BULATSA, uchaze wathi: “Ngiyasamukela lesi sinyathelo, esizosekela ukuvela okuqhubekayo kobuchwepheshe nokusebenza kwethu. Ukuthuthukiswa kwesu lesikhala lasemkhathini kuzophinde kukhulise ukubambisana okuhle namakhasimende ethu kanye nabalingani bethu futhi kube nomthelela ekufezeni izinjongo ezisezingeni eliphakeme ze-SES. Ukuqaliswa kwamaphrojekthi abalulekile we-BULATSA ahlobene nokuhlelwa kabusha kwendawo yezindiza kanye namakhono okuhlangabezana namazinga aphakeme omgwaqo kuhlangene nobunzima bokusebenza okwandayo kuyisisekelo sokulethwa kwezinhloso ezinhle zeBULATSA. ”
U-Alexandre de Juniac, uMqondisi Jikelele ne-CEO ye-IATA, uthe: “IBulgaria izoba sesikhundleni esibaluleke kakhulu esikhaleni sasemoyeni sase-Europe njengoba isiminyaminya se-East-West sanda eminyakeni ezayo. Futhi iBulgaria uqobo ingumnotho okhula ngokushesha ozobona ukuqhuma okukhulu kwabagibeli. Ukuqinisekisa ukuthi isikhala somoya senzelwe ukubhekana nokwanda kwethrafikhi ngeke kusizuzise iBulgaria kuphela kepha nomphakathi obanzi waseYurophu ojikelezayo. Njengoba iBulgaria ithatha isikhundla sokuba nguMongameli we-European Union, lokhu kuzibophezela ekwakheni Isu Likazwelonke Lendawo Yasemoyeni kuwuphawu olubambekayo lwesizwe esifeza indima yobuholi obusezingeni eliphezulu. Sihalalisela iBULATSA ngombono wayo, futhi sibheke phambili ekusebenzisaneni nabo ukwenza ukuba indawo yezindiza ibe yimpumelelo. ”
Isu Lomoya Wendawo Kazwelonke YaseBulgaria lizobandakanya:
• Ukuqiniswa kokuhlanganiswa kwemigwaqo yezindiza esebenza kahle;
• Ukusebenza kwe-Airspace ezingeni lesifunda kanye naphakathi kwezifunda;
• Ukwanda komthamo ngenkathi kuqinisekiswa amazinga okuphepha;
• Ukufika ngesikhathi kwezindiza okuthuthukile;
• Ukwabelana okungcono kwemininingwane kuyo yonke inethiwekhi yezokuthutha emoyeni yaseYurophu.
Impendulo ye-UNWTO eKenya: Ubani ongamisa lo Nobhala...
U-Bartlett engxoxweni ne-Emirates Airlines Ukwethula...
Ukubuyekezwa Okusha kwe-Anguilla Kuphrothokholi Yokungena Kokuhamba Iyaqala...
I-Bahamas Imemezela Ukubamba iqhaza Kwayo e-WTM London...
Izwe lakamuva laseSlovakia le-EU uku-oda ukuvalwa kwe…
Yini okudingeka ukwazi ngokuthuthela eDubai
Kuzanywa futhi Kwahlolwa: I-Boot Camp eSychelles Emangalisa
U-Hilton Uvula Ihhotela Elikhulu Kunazo Zonke e-Asia Pacific
I-Boeing iphusha abagibeli abasha be-737-800BCF
Ukuthenwa ngamakhemikhali kwabadlwenguli abaphindayo kugunyazwe...
Ukuvalwa kwe-COVID-19 okusha eNetherlands kuzoba okokuqala ...
Indiza entsha esuka eSan Jose iya ePalm Springs e-Alaska...
Amadolobha ayisithupha kwayishumi angcono kakhulu emhlabeni ukuze kuthuthwe...
ICostco yokuqalisa kabusha iphepha langasese namanzi asemabhodleleni ...